Bloated Stomach (ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bloated Stomach (ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း )
Bloated Stomach (ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း ) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Ye Pyae Hein ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိသော လေများသည်ပုံမှန်ထက် ပိုမိုများပြားလာသောအခါ ပြည့်အင့်ခြင်းကိုစတင်ခံစားသည်။ တစ်ခါတရံတွင် သိသာမြင်သာသည်အထိ ဗိုက်ဖောင်းခြင်း မျိုးလည်းရှိတတ်ပါသည်။ မြိုချလိုက်သောလေများ။ အစာချေရာမှ ထွက်ပေါ်လာသောလေများ အလွန်များပြားလာသောအခါ မအီမသာဖြစ်ခြင်းစတင်ခံစားရတယ်။ တစ်နေ့တည်းတွင်ပင် အကြိမ်မြောက်များစွာ ခံစားရခြင်းမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
Bloated Stomach (ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အဖြစ်များသောရောဂါဖြစ်ပြီးကလေးငယ်များတွင်လည်း ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသားများ ထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အခြားသော အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောဂါများ(ဥပမာ-အူလမ်းကြောင်း မငြိမ်သက်ရောင်ရမ်းသောရောဂါ Inflammatory bowel syndrome)နဲ့တွဲ၍ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြင်းထန်ဆိုးရွားသောရောဂါမဟုတ်သည့် အတွက် အလွယ်တကူပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
Bloated Stomach (ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသောလက္ခဏာများ အပြင် အခြားလက္ခဏာတွေ လည်းရှိနိုင်ပါ သေးတယ်။ သင့်ဆီမှာမေးခွန်းတစ်ခုခု ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် အစားအသောက် အနေအထိုင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာ သက်သာပျောက်ကင်းတတ်သော်လည်းအောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များမှတစ်ခုခုရှိခဲ့လျှင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ပြသဆွေးနွေး
သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများမှ တစ်ခုခုရှိနေလျှင် သို့မဟုတ်မေးခွန်း တစ်ခုခုရှိနေလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတစ်ဦးချင်း၏ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်သည့်အတွက်သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုသည်ကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Bloated Stomach (ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ခြင်းသည် အခြားသောရောဂါများ( ဥပမာ အူလမ်းကြောင်း မငြိမ်သက်ရောင်ရမ်းသည့်ရောဂါ Inflammatory bowel syndrome) ကြောင့်ဖြစ်တတ်သကဲ့သို့ အောက်ပါအခြေအနေများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
-အဆီအဆိမ့်များနှင့် ဂတ်စ် (gas)ပါသောအချိုရည်များ သောက်သုံးခြင်း
-အစားအစာကို တစ်ခါတည်းနှင့်အများကြီး စားခြင်း
ငါ့ဆီမှာ Bloated Stomach (ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
-မိမိစားသောအစားအစာတွင် အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝလွန်းသော အသီးအနှံ ၊အသီးအရွက၊် အစေ့အဆံ၊ပဲ စသည်တ့ိုပါလျှင်
-သင်သည် လက်တို့စ်(Lactose)၊ဂလူတမ်(Gluten) စသည်တို့နှင့်မတည့်လျှင်
(လက်တို့စ်သည် နို့၊ဒိန်ခဲနှင့် နို့ထွက်ပစ္စညိးတို့တွင်ပါဝင်ပြီး ဂလူတမ်သည် ပေါင်မုန့်၊ ပါစတာ စသည့် ဂျူံနှင့်ပြုလုပ်သောအစားအစာတို့တွင်ပါဝင်သည်။)
-သင်သည် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းသူဆိုလျှင်
– ဂတ်စ် (gas) ပါသော အချိုရည်များကို သောက်သုံးတတ်လျှင်
-အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းမငြိမ်သက်ရောင်ရမ်းသောရောဂါ (Inflammatory bowel syndrome) ကဲ့သို့နာတာရှည် ရောဂါအခံရှိလျှင် ပိုမိုဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။
Bloated Stomach (ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အဓိကအားဖြင့် ကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်မှ ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်းနှင့် သေချာစွာ
စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါကိုသိရှိနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ခံစားနေရသောလက္ခဏာများ၊ အစား အသောက်ပုံစံ၊အခြားသုံးစွဲနေသောဆေးဝါးများ ကိုလည်း ဆရာဝန်ကို ပြောပြရန်လိုပါတယ်။
Bloated Stomach (ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မည့်သည့်အစားအစာစားရင် ဝေဒနာခံစားရသည်ကို မှတ်သားထားခြင်းဖြင့် ထိုအစား အစာကိုသိရှိရှောင်ကြဉ်နိုင်မည်။
-အဆီဓါတ်များသော အစားအစာများသည် အစာကြေရန်ခက်ခဲသဖြင့် အလွန်အမင်း
-အမျှင်ဓါတ်များသော အစားအစာများသည် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သော်လည်း ဗိုက်ကယ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်သည့်အတွက် အမျှင်ဓါတ်ပါသောအစားအစာများနှင့် အသားမကျသေးခင်တွင် အနည်းငယ်မျှသာစားသုံးသင့်သည်။
-နို့နှင့် နို့ထွက် ပစ္စည်းများကို တစ်ကြိမ်တွင် အနည်းငယ်သာစားသုံးသင့်သည်။
-Simeticone-မလိုအပ်သော အစာအိမ်တွင်းမှလေများကို ကြေပျက်သက်သာစေပြီး
-Activated charcoal-လေကြေစေနိုင်သော အာနိသင်ရှိသည်။
-Lactase ပါဝင်ဆေးများ-နို့တွင်ပါဝင်သောသကြား လက်တို့စ်နှင့် မတည့်သောသူများတွင် လက်တို့စ် lactose ကိုချေဖျက်ရန် ကူညီပေးသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ရောဂါကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်ဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ရောဂါကိုကုသရာတွင်အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
-ဆီကြော်နှင့် အဆီများသောအစားအစာများကို ရှောင်ပါ။
-ဂတ်စ် (gas) ပါသော အချိုရည်များကိုရှောင်ပါ။
-ပီကေဝါးခြင်းသည်လည်း အစာအိမ်လေပွခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်အတွက် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
The3Causes of Toxic Bloating. http://www.doctoroz.com/article/3-causes- toxic-bloating. Accessed June 10, 2016.
Gas and gas pains. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gas- and-gas-pains/in-depth/gas- and-gas- pains/art-20044739?pg=2. Accessed June 10, 2016.
How is bloating diagnosed? https://www.sharecare.com/health/bloating/how-bloating-diagnosed. Accessed June 10, 2016.
Bloating 101: Why You Feel Bloated. http://www.webmd.com/digestive-disorders/diarrhea-10/bloated- bloating. Accessed June 10, 2016.sThe3Causes of Toxic Bloating. http://www.doctoroz.com/article/3-causes- toxic-bloating. Accessed June 10, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 19, 2018
ကိုယ့်နာမည်တောင်မေ့ချင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ မေ့တတ်သူလေးတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်း(၅)ခု